GAALKACYO : Taliska Ciidanka Booliska PL iyo Maamulka gobolka oo sheegey in ay burburiyeen Shabakadii Argagixisada
December 2, 2012 11:50 am GMT - Written by Editor - Edited by Editor
Garoowe:-Taliyekuxigeenka Ciidanka Booliska Puntland Gen. Muxuyadiin Axmed Muuse oo muddooyinkan hawlgal dhanka ammaanka ah ka wadey magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu sheegey in ay burburiyeen Shabakadii isku xirneyd ee Argagixisada ee dadka Waxgaradka, Aqoonyahanka Nabadoonada iyo Biri ma geydada dili jirey, waxa uu sheegey in ay qabteen kuwo badan oo qaarkood ay sharciga hor keeneyn oo la Xukumey qaarna ay dhawaan ay hor keeni doonaan Maxkamadaha.
Gen. Muxuyadiin, waxa uu sheegey waxa uu codsadey in Shacabku la shaqeeyo oo ay soo sheegaan cid kasta oo ka mid ah Argagixisada, waxaana uu sheegey in aan la sheegeyn dadka soo wargasha,….”Waa fulayiin kuwa dadka Bambaanooyinka ku tuura, afka soo dabasha maaha in laga baqo iyaka ayaa ah kuwu fulayiin ah oo cararaya, naftu wakhti la cayimey bey dhimaneysaa, waa in Booliska lala shaqeeyaa ayuu yiri…”.
Taliyekuxigeenku, waxaa kaloo uu ka hadley baaritaano lagu sameeyay Masaajid, waxaana uu sheegey in aysan la dagaalsaneyn Masaajidada iyo dadka wanaagsan ee ku tukuda, balse ay ku raadjoogaan dad dhiigya cabbiin ah oo dad laayey kuwaas oo ay soo qabqabteen qaarkood.
Sidoo kale, Guddoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Tigey ayaa qirey in Ciidamada Ammaanka ee Puntland ee Garoowe ka tagey ay waxweyn ka badaleen ammaanka iyo horumarka gobolka gaar ahaan magaalada Gaalkacyo.
Waxa uu sheegey in iminka aan la maqlin dhawaqa rasaasta oo ay ammaan tahay magaaladu, waxa uu sheegey in la burburshey intii badneyd Shabakadii wax leyn jirtey, waxa uu sheegy in la qabqabtey intii badeyd dadkii Muqaadaraadka ka shaqeyn jirey iyo Muqaadaraadkii oo lala dagaalamey.
Ugu dambeyntii, waxa uu mahad ballaaran u jeediyay Shacabka gobolka Mudug oo uu sheegey in ay xiligan u jeesadeen horumarinta gobolka iyo ka shaqeynta ammaanka.